Puntland oo laga bilaabay Ololaha Todobaadka Dhireynta[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Puntland oo laga bilaabay Ololaha Todobaadka Dhireynta[Sawirro]
GAROOWE – Wasaaradda degaanka,duurjoogta iyo dalxiiska Puntland oo gacan ka helaysa hay’adda caalamiga ah ee CARE ayaa magaalada Garoowe ka bilowday Ololaha Todobaadka dhireynta Puntland taasoo guud ahaan Puntland laga bilaabayo.
Ololahan ayaa socon doona inta u dhaxeysa 17-ka ilaa 22-ka bishan April,waxaana xafladii furitaanka lagu qabtay xarunta PDRC ee Garoowe,waxaana ka qeybgalay Madaxda sare ee Wasaaradda Degaanka,mas’uuliyiin ka socotay CARE,Adeso,ardeyda Jaamacadaha ,kuwa dugsiyada dhexe iyo sare iyo marti sharaf kale.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda degaanka Puntland Faarax Cali Cabdi oo furay Ololahan ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ka dhashay dhir jarista iyo xaalufinta degaanka,wuxuuna tilmaamay in abaaraha soo noqnoqonaya ee dadka iyo duunyada saameeyey ay ka dhasheen xaalufka iyo cimiladda sii xumaanaya.
Faarax Cali Cabdi ayaa ku booriyey dhalinyarada iyo ardeydii ka qeybgashay ololahan in qof kasta oo iyaga kamid ah uu beero hal geed ,saaxibadiisa iyo ehelkiisana ku dhiirigeliyo in ay beeraan.
Ololahan ayaa mudada uu socdo ,waxay Wasaaradu qeybin doontaa in ka badan laba kun oo geed oo la siin doono jaamacadaha,dugsiyadda,xarumaha dowladda,qoysaska reer Puntland ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn.
Ololahan ayaa sanadkaan hal ku dhig looga dhigay “Geedka 20 jir ku beertid 60 jir kaagaad u aydaa.”
Fartuun Cismaan Cali oo Ka socotay Hay’adda Care xafiiska Puntland oo faahfaahin ka bixisay faa’iidooyinka iyo ujeedooyinka loo samaynayo ololahan oo sanadkii mar la qabto, waxay sheegtay in wasaaradda Degaanka iyo hay’ada care ay mashruucan wada wadaan, uuna maalgalinayo Ururka Midowga yurub.
Furitaankii ololaha Asbuuca dhiraynta Puntland waxaa kaloo ka hadashay Agaasimaha Wasaaradda Degaanka Muna Daahir oo guud ahaan dadka reer Puntland ugu baaqday inay ka faa’iidaystaan ololahan Isbuuca dhiraynta.
Waxay kaloo sheegtay in fariimo wacyigalin ah oo la xiriir muhiimda dhirta iyo degaanka laga siin dayn doono warbaahinta, Sidoo kale intii ay socotay xafladu Ardayda ka socotay Dugsiysadda Garoowe qaarkood waxay soo bandhigeen Gabayo iyo suugaan kale oo lagu muujinayo faa’iidada dhirta iyo degaanka.